नेपाल लक डाउनको अमेरिकामा प्रशंसा - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
काम गर्न सक्ने उमेरकी एक छोरी र करिब ११ वर्षका छोराका साथ एक दम्पती गत महिनाको दोस्रो साता संसारकै सपनाको देश अमेरिका उडे । त्यहाँको उन्नतिको चमक देखेर दङ्ग थिए ।
तर एक्कासि चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) त्यहाँ पनि देखियो । अमेरिका पुग्दा कोरोना भाइरसको सामना गर्नुपर्ला भन्ने सोच परिवारका सदस्यमा एक प्रतिशत पनि थिएन । यतिबेला अमेरिकामा कोरोनाको कहर कहालिलाग्दो छ । एक लाख चार हजार २५६ बढीमा सङ्क्रमण देखिइसक्यो । एक हजार ७०४ को ज्यान गइसक्यो
एकै दिन ३० हजार बढी सङ्क्रमित छन् । निको हुने निकै कम दुई हजार २२५ छन् । यो सङ्ख्या बिहीबारदेखि एक्कासि बढेको हो । ‘कोरोनाको कहर देख्दा अमेरिकामा मर्न आइएछ कि जस्तो लाग्दैछ, यहाँ पूर्ण लकडाउन अझै गरेको छैन,’ परिवारका एक सदस्यले भने।
. ट्रम्पको गल्तीले ओबामालाई फाईदा : चुनावको संघारमा सक्रियता बढ्यो
. अमेरिकाद्वारा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँगको सबै सम्बन्ध तोड्ने ट्रम्पको घोषणा
उनीहरूजस्तै कमाएकै पैसामा निर्भर हुनेको यहाँ विचल्ली छ । सहरमा त्रास छ । धेरैले काममा जान छाडे । नयाँ कामदारले छुट्टी पाउँदैनन् । त्यसैले जोखिममा छन् । खानेकुरा किन्न र हिँडडुल गर्न निकै डरमर्दो भएको छ । केही सहरका सीमामा लकडाउन छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान बन्द छ । आन्तरिक सुचारु छन् । जसले एक सहरको महामारी अर्को सहरमा सहजै पु¥याइरहेको छ । बजार, सुपरमार्केट जताततै विषादी छर्किइँदैछ । कतै गएर किनमेल गर्न पनि उस्तै भीड हुन्छ । सामान, मान्छे छुन डर लाग्ने भएको छ ।
चिन्ता नहोस् भनेर नेपालका परिवारलाई ‘राम्रै छौँ’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन् । नेपालमा खाने दाल, भात र तरकारीको स्वाद लिन पाएका छैनन् । त्यसैको शक्तिले नै नेपालीले अनेक रोगसँग लड्न सकेको उनी अनुमान गर्छन । ‘बिहानै उठ्यो पाउरोटी खायो, कुद्यो,’ उनी भन्छन् । नेपालमा घरैपिच्छेको पसल र आपसी सद्भावमै पैँचो चल्छ । अमेरिकामा त्यो हुन्न । भए खाने नत्र भोकै सुत्नुपर्छ । सडकमै अलपत्र परेकालाई पनि कसैले हेर्दैन ।
अमेरिकामा गत २० जनवरीमा वासिङ्टन डिसीमा पहिलो सङ्क्रमित फेला प¥यो तर अमेरिकी सरकारले त्यसलाई त्यति महìव दिएन । चीनको वुहानबाट सङ्क्रमण त्यता व्यापक रूपमा आउँदैन भन्ने आँकलन ग¥यो । सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान कायमै गरिए । जसले अत्यधिक छिटो सङ्क्रमण अमेरिकामा बढायो । न्युयोर्कमा अझ तीव्र भयो ।
वासिङ्टन डिसीमै बल्ल मङ्गलबारदेखि लकडाउन भयो । ‘हामी घरमै छौँ, पसल र ग्यास स्टेसन खुलेका छन्, स्कुल–कलेज, होटल–रेस्टुरेन्ट बन्द छन्,’ वासिङ्टन डिसीमा रहनुभएकी सुधा जिसीले भने। पछिल्लोपटक न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, न्युजर्सी, लुसियाना लगायतका केही सहर बन्द छन् तर आन्तरिक सवारी चलेका छन् । बाह्य सहर र प्रान्तसँग भने आवागमनमा रोक लगाइएको छ । हवाई उडान यथावत् छन् ।
उनले नेपालको तयारीको प्रशंसा अमेरिकीले गर्ने गरेको बत(ाउनुभयो । ‘नेपालले पहिल्यै राम्रो तयारी गरेको छ, देश नै लक डाउनमा राखेर सङ्क्रमित खोेज्नु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने। अमेरिकामा रहेका नेपालीको यकिन तथ्याङ्क छैन । जसका कारण कहाँ कति जोखिममा छन्, पत्ता लाग्न सकेको छैन । करिब दुई लाख रहेको अनुमान छ ।
ढिलै भए पनि अमेरिकी सरकारले राहत रकम घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ । शुक्रबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राहत प्याकेजको प्रस्तावमा सही गर्नुभएको जानकारी ट्विटरमा दिए। राहत प्याकेजको प्रस्तावमा सही गर्न उहाँलाई विपक्षी दल र नागरिकको तीव्र दबाब थियो ।
विश्वभर झन्डै छ लाख ९०१ सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये २७ हजार ४१७ को मृत्यु भएको छ । एक लाख ३३ हजार ४२६ उपचारपछि निको भए । अमेरिकापछि अहिले इटली सङ्क्रमणमा दोस्रो बढी छ । तेस्रोमा चीनको आँकडा छ । गोरखापत्र द‌ैनिकमा खबर छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, जेठ २३ २०७७ ११:२४:५२